Faarax X. Maxamed Canbaashe – Wargeyska Waxgarad
Home / Faarax X. Maxamed Canbaashe
Faarax X. Maxamed Canbaashe
June 28, 2018	Falanqayn 0
Ummada Soomaliyeed waxay soo martay halgan dheer oo ay ku higsanaysay xornimo iyo madaxbanaani. Halgankaa iyo dadaalkaa looma kala hadhin, miyi iyo magaalo, gudo iyo debed, waxa loo guntaday in la helo madaxbannaani buuxda oo lagaga hoos baxo gumaystihi reer yurub ee qaybiyey ummad isku af iyo diin ah. dhulkeedana …
May 20, 2018	Aragti, Qubane 0
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر Intuu ka muuqdo liilanka cadi (waagu) ka madow (Aroortii) Eebbe —sareeyoo hufnaaye— waxa uu kitaabkiisa inoogu tilmaamay waxyaalo badan. Adduun iyo aakhiro wax badan ayaa la inoo iftiimiyey. Siyaabo kala duwan ayaa wax la inoogu sheegay si fahamku u soo …
Sidee loo Tayeyn karaa Tacliinta Sare?
September 29, 2017	Aragti, Faallo, Mux39-Okt17, Waxbarasho 0
Mar kasta oo aan arko arday ka qalin jebinaysa jaamacadaha dalka waan ku farxaa; isla markaa hadana waa ka naxaa! Su’aalo badanina waa ay igu soo dhacaan. Jaamacadaha Somaliland ka jiraa waxay gaadhayaan ilaa 30 jaamacadood in ay sii bataana waa la arkaa. Waxaa sannadkii ka qalinjabiya arday lagu qiyaaso …